Sida loo akhriyo loona fahmo khariidada cimilada | Saadaasha Shabakadda
Sida loo akhriyo loona fahmo khariidada cimilada
Aragtida cimiladu waa wax aan qabanno maalin kasta. Si kastaba ha noqotee, waxaa laga yaabaa inaanan sifiican u fahmin marka cimiladu tilmaamayso khariidada. Waxaan aragnaa khariidadda Isbaanishka oo leh xariiqyo badan, calaamado iyo lambarro. Dhammaan calaamadahaasi maxay tilmaamayaan?
Halkan waxaad ku baran kartaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato akhri khariidada cimilada oo si fiican u faham. Kaliya waa inaad sii wadataa akhriska oo aad weydiisaa haddii aad su'aalo qabto 🙂
1 Mabaadi'da aasaasiga ah ee khariidadda cimilada
2 Muhiimadda cadaadiska Hawada
3 Calaamadaha khariidada cimilada
3.1 Tarjumaadda nidaam cadaadis hooseeya oo sarreeya
4 Noocyada hore
Mabaadi'da aasaasiga ah ee khariidadda cimilada
Khariidadaha cimiladu waxay na siinayaan matalaad si fudud loo fududeeyay oo ku saabsan xaaladda cimilada hadda jirta ama saadaasha aagga. Tan ugu caansan waa in la falanqeeyo dusha sare, maadaama ay tahay meesha ay cimiladu innaga saameyso. Fikradaha guud ee saadaasha hawadu way fududahay in la fahmo. Dadka badankiisu waxay u baahan yihiin macluumaad isaga ku saabsan.sida roobka, dabaylaha, haddii ay jiraan duufaanno, roob dhagaxyaale, baraf, IWM
Dhinacyadan aad ayey muhiim u yihiin markay tahay fahamka waqtiga. Waxa ay ku qaadato si ay u roob, sababta ay u dhacdo, iyo sida ay u xoog badan tahay. Si loo fahmo hawlgalka doorsoomayaasha saadaasha hawada badankood aad ayey muhiim u tahay in la ogaado cadaadiska Hawada. Cadaadiska Hawada, xaaladaha badankood, ayaa go'aamiya cimilada. Meelaha cadaadiska hawadu ka sareeyo, cimilo wanaagsan oo qallalan ayaa jirta. Taas bedelkeeda, haddii ay ka hooseyso, waxaa jiri doona hawo badan oo qoyan iyo cimilo xun.
Muhiimadda cadaadiska Hawada
Marka uu jiro nidaam cadaadis sareeya wuxuu ku saabsan yahay hawo cufan. Sababtuna waa iyadoo hawadu ka qabowsan tahay kana qalalan tahay hawada hareeraha ku hareeraysan. Marka tani dhacdo, hawada ugu culus waxay ka dhacdaa nidaamka cadaadiska. Waqtigaan, waa marka aad leedahay jawi wanaagsan oo daruuro yar leh.
Dhanka kale, marka aan leenahay nidaam cadaadis hoose, waxay ka dhigan tahay in cufnaanta hawadu ay ka cufnaan yar tahay. Tani waa sababta oo ah hawadu waa ka qoyaan badan tahay ama ka sii kulul tahay. Sidaa darteed, hareeraha hareeraha ayaa gudaha u galaya, bartamaha nidaamka, halka hawada fudud ay kor u socoto. Marka iftiinka, hawo diirran ay kacdo oo ay la kulanto lakabyo qabow, waxay u gudubtaa daruuro. Maaddaama daruuraha ay u koraan si qumman, daruuraha roobabku caanka ku yihiin ayaa samaysma.
Nidaamyada meesha cadaadisku waa duufaanno aad u hooseeya. Daruurahan ayaa samaysmaya oo ka wareegaya cirka. Si daruurtan ay u samaysmaan, hawada kulul, ee qoyan waa inay sare u kacdaa si ay u soo saarto horumar toosan.
Markaad aragto khariidada cimilada isku day inaad falanqeyso sida ay u cabiraan cadaadiska. Waxay ku saabsan tahay cabbiraadda waxa hawadu culeyska dhulka ku tahay. Halbeegga cabbirka waa millibar. Tani waa muhiim in la ogaado iyadoo la ogyahay in qaabab badan oo cimiladu ay la xiriiraan cadaadiska Hawada. Qiimaha celceliska cadaadiska ee heerka badda waa 1013 mb. Marka aan leenahay nidaam cadaadis sare leh, badanaa wuxuu gaaraa qiyamka 1030 mb. Si kastaba ha noqotee, marka nidaamku cadaadis hooseeyo, qiimayaashu waxay hoos ugu dhici karaan illaa 1000 mb ama xitaa ka yar.
Calaamadaha khariidada cimilada
Si loo barto astaamaha ugu muhiimsan ee khariidadda cimilada, waa inaad u feejignaataa astaamaha cadaadiska. Si aad u aqriso cadaadiska dusha sare, hubi isobars. Kuwani waa xariiqyo tilmaamaya isla qiimaha cadaadiska jawiga ee meelo kala duwan. Taasi waa, haddii aan aragno khariidad ay khadadka isobar aad isugu dhowyihiin, waxaa jiri doona cimilo xumo. Tani waa sababta oo ah masaafo gaaban, qiimaha cadaadiska ayaa isbedelaya. Sidaa darteed, waxaa jira xasillooni darro xagga jawiga ah.
Khadadka isobar ayaa tilmaamaya xawaaraha iyo jihada dabaysha. Dabaylaha waxaa laga hagayaa meelaha ay ku badan tahay cimilada cimilada iyo halka ay ku yar tahay. Sidaa darteed, waxaan awoodi doonaa inaan ku ogaanno macluumaadkan kaliya falanqaynta qiyamka isobar. Markaan fiirineyno isobars-yada lagu meeleeyay goobo yar yar, bartamaha waxay muujineysaa xarun cadaadis. Waxay noqon kartaa labadaba mid sare, oo leh calaamadda A, iyo mid hoose, oo leh calaamadda B.
Waa inaan ogaanno in hawadu aysan hoos ugu soo degin heerarka cadaadiska. Waxay ku wareegeysaa hareerahooda sababtoo ah saameynta Coriolis (wareegga Dunida). Sidaa darteed, isobars-yada ku jira jihada saacadda waa qulqulka qulqulka 'anticyclonic' iyo qulqulka qulqulka ka soo horjeeda Antyclone waxay la mid tahay heerkulka sare iyo cimilada wanaagsan. Duufaanta waa xasilooni-darrada ku habsatay jawiga oo u rogmaysa duufaan. Markay isu soo dhowaadaan isbaarada, ayaa xawaaraha xawaaraha dabayshu sii xoogeysanayaa.
Tarjumaadda nidaam cadaadis hooseeya oo sarreeya
Markay duufaan dhacdo badanaa waxaa weheliya duufaano leh daruuro, dabaylo, heerkulka iyo roobka oo kordha. Tan waxaa lagu matalayaa khariidada cimilada oo leh isobars si dhow u buuxan. Falaartu waxay u socotaa saacad ka dib dhanka woqooyi iyo "T" bartanka isobar.
Xaaladaha cadaadiska sarreeya ma metelaan roob. Hawada ayaa ka qalalan oo iyaga ayaa metelaya H bartanka isobar. Fallaadhuhu waxay ku wareegaan jihada dabaysha. Jihada saacada ujirta dhanka waqooyi.
Khariidadaha saadaasha hawada ee ay innagu tusayaan telefishanka, aagga hore waxaa lagu arki karaa iyagoo tilmaamaya. Haddii horraantu ay dhex maraan aag, waxay u badan tahay inay cimiladu kala duwanaan doonto. Buuro iyo biyo faro badan ayaa marin habaabin kara jidkaaga.
Waxaa jira dhowr nooc oo hore waxayna ku metelaan khariidadda cimilada astaamo kala duwan. Midka hore waa wejiga qabow. Marka wejiga hore ee qabow uu dhex maro aag, waxay u badan tahay in roobka da'o ay noqdaan kuwo mahiigaan ah oo leh dabayl xoog leh Khariidadaha cimilada waxaa matala khadadka buluuga ah iyo saddexagalka dhinaca jihada dhaqdhaqaaqa xagga hore.
Nooca labaad waa wejiga diiran. AnigaWaxay tusineysaa kororka heerkulka markay soo dhowaato. Cirka ayaa si dhaqso leh u kala baxa marka hore laga gudbo. Haddii hawada kulul aysan degganeyn, duufaannada qaarkood way dhici karaan. Waxay ku metelaan khariidadda cimilada oo leh khadad casaan ah iyo wareegyo wareeg ah dhinaca ay u socdaan.
Nooca ugu dambeeya waa wejiga xiran. Waxay samaysantaa marka wejiga hore ee qabow ka hor maro mid diiran. Waxay la xiriiraan qaar ka mid ah saameynta saadaasha hawada sida duufaanta. Waxaa jiri kara xirmo diiran ama qabow. Marka wejiga xiran uu soo galo, hawadu wey sii qallajisaa. Waxay metelaan xariiq guduudan iyo wareegyo iyo saddexagal jihada dabaysha.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad ku baran karto tarjumaadda khariidadda cimilada. Su'aalo kasta, ku dhaaf faallooyinka. Waan ku farxi doonaa inaan soo jawaabno 🙂
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Sida loo akhriyo loona fahmo khariidada cimilada
Waad ku mahadsantihiin sifiican ayaa loo sharaxay, waxaa igu xirmay barashada inaan sifiican u turjumo waqtiga.
Ku jawaab Maro
Aad baad ugu mahadsantahay muuqaalka iyo qoraalka. Wax badan ayaan bartay oo waxaan doonayay tusaalooyin badan.
Duufaanta aad sheegtay waxay ku taal waqooyiga Talyaaniga, iyadoo la tixgelinayo jihada dabaysha ee ay keeni karto, marka hawadu ka timaado qaaradda Yurub, ma waxay noqon doontaa hawo qalalan oo ay ku yar tahay roobabku?
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato volcano-ka Kilauea
Waa maxay iyo sidee ayaa loo sameeyaa cyclogenesis qarxa